Amagqabantshintshi- iTekhnoloji yeFilitha
Amanzi adibene ngokunzulu nempilo nentlalo-ntle yethu. Siyaqhubeka nokuphonononga iindlela ezintsha zokukhathalela indlela osela ngayo yonke imihla. Yintoni esenza sahluke kwaye sahluke kwabanye abacoci bamanzi bokucoca amanzi bubuchule bethu ekunikezeleni iimveliso ezifanelekileyo kunye nezisombululo eziya kuthi zixatyiswe ngamaqabane kwihlabathi liphela.
Ubungcali bethu, Impumelelo yakho
Amanzi adibene ngokunzulu nempilo nentlalo-ntle yethu. Siyaqhubeka nokuphonononga iindlela ezintsha zokukhathalela indlela osela ngayo yonke imihla. Yintoni esenza sahluke kwaye sahluke kwabanye abacoci bamanzi bokucoca amanzi bubuchule bethu ekunikezeleni izisombululo ezinobuchule kunye nezixabisekileyo kumaqabane ethu ehlabathi.
Amanzi adibene ngokunzulu nempilo kunye nentlalo-ntle yethu. Siyaqhubeka nokuphonononga iindlela ezintsha zokukhathalela indlela osela ngayo yonke imihla. Yintoni esenza sahluke kwaye sahluke kwabanye abahlambululi bamanzi ngumnikezeli wethu ngobuchule ekuboneleleni ngezisombululo zonyango ezitsha zokuhambisa ixabiso elongezelelekileyo leshishini kubo bonke abathengi bethu kwihlabathi liphela.
Kutheni iTechnical Filter?
Ezinye zezibonelelo eziphambili esikholelwa ukuba sizinika abathengi
Itekhnoloji ejolise kwimakethi
Ukuhlala kugxilwe ekuhlolweni kwetekhnoloji yamanzi ehlaziyiweyo
Ukusukela ukugqwesa komgangatho kwindawo yethu yovavanyo
Ukufakela ingqondo engacacanga kuyo yonke inkqubo yokwenza
Umsebenzi wobugcisa kunye nokuzivumelanisa neemeko
Umtsalane wethu kwizinto zokucoca ulwelo kunye nokunqwenela kwethu ukukufaka kwikhaya lakho kuqala ngo-2002. Kule minyaka ili-18 idlulileyo, sandise imveliso yethu ukusuka kumacebo okucoca amanzi ukuya kwinkqubo yokuhluza amanzi, ukusuka kwimveliso ekungenwa kuyo ukuya kwinqanaba- iimveliso zokusetyenziswa. Umgca wethu ophambili ngoku ubandakanya isihluzo sediment, isihluzo samanzi, inkqubo yokubuyisela umva ekhaya, isixhobo sokuhambisa amanzi, neekhatriji zokucoca ulwelo, njl.
Amava kuzo zombini i-ODM kunye nemodeli yeshishini le-OEM, ubhetyebhetye bethu ekunikezeleni isisombululo sokhathalelo lwasekhaya kunokunceda ukusombulula imiceli mngeni yakho yamanzi, kukwenze uzive uxabisekile trully kwaye ukubuyise ukwenza ukuphinda ishishini nathi. Siyayixabisa intsebenziswano neshishini esingena kulo kwaye sinethemba lokwenza unxibelelwano olunentsingiselo nabantu abaneemfuno zamanzi acocekileyo kwihlabathi liphela.
iminyaka ibandakanyeke ngokunzulu kushishino lokucoca amanzi ngamava atyebileyo
Abasebenzi abazinikele kuyilo lwemveliso, ubuchwepheshe kunye nobunjineli
amalungelo abenzi patent technology ukuhambisa ixabiso nokunceda ukufumana ukhuphiswano
Isikwere seemitha zelebhu yangaphakathi echonga umngcipheko onokubakho wokuqinisekisa umgangatho weprimiyamu
Siyazibophelela ekukhokeleni abantu kwimpucuko yamanzi yokuphila impilo esempilweni.
Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Indlu yonke yokuCoca uManzi, Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis, Umcoci wamanzi waManzi aKhuni, Hluza iCartridge,